HAILEMARAIM: XAALADA DEGDEGA AH LAMA QAADAYO | SOMALISTATE.COM
HAILEMARAIM: XAALADA DEGDEGA AH LAMA QAADAYO
No comments ADDIS ABABA – R’isulwasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in uuna dalkiisu ku cararaynin in xaalada degdega ah la qaado ilaa la hubsado in dalku caadi ku soo noqdo.
Dawlada Itoobiya ayaa tibaaxday in xaalada degdega ahi soo celisay nidaamkii iyo kala danbayntii kadib markii ay dalka gilgileen dibadbaxyo wata rabshado lagaga soo horjeedo siyaasada dawalada.
Xaalada degdega ah oo la soo rogay bishii Oktoober ee kalhore ayaa loogu talagalay inay socoto ilaa 6 bilood oo wajiga hore ah, balse lama hubo in lo kordhin iyo in kale.
Inkastoo gudiga hogaamisa dabagalaka xaalada degdega ah uu madax u yahay wasiirka gaashandhiga ee wadanku, haddana mucaaradka dawlada ayaa ku andacooda in 4 jenaarl oo ka soo jeeda jabhada TPLF ay si dhab ah u hayaan isteerinka lagu hago xaalada degdega ah.
Ra’isulwasaaraha ayaa maanta sheegay in aan xaalada la qaadin doonin ilaa la sii xoojyo faa’iidooyinka ilaa eega laga helay.
Dhanka kale, Hailemaraim ayaa ku dhawaaqay in shirkadaha shisheeyaha ahi saami ku yeealan karaan kombaniyada ay dawladu leedahay. Waxa uu si gaar ah u xusay shirkada la tacaasha arrimaha xamuulka(rarka) ee dawlada. Waa markii ugu horeeay ee Itoobiya ogolaato in kambaniyo ajanabi ahi wax ku yeeshan shirkadaha dawliga ah.
Waxaa jira warar tibaaxaya in xukuumada EPRDF u baahan tahay lacag adag si loo socdsiiyo shirkadaheeda, hasayeeshe Hailemaraim ayaa arintaas gaashanka ku dhuftay isaga oo sheegay in xukuumadu go’aanka u qaadatay si loo casriyeyo adeega kambaniyada.
Hay’ada lacagta aduunka,IMF, iyo Bangiga Aduunka ayaa dawlada horey uga baaqay inay furfurto dhaqaalaha wadanka si loo kobciyo koritaankiisa.
Shirkdaha shisheeyaha ah ayaa aad u daneeyna Bangiyada wadanka iyo hay’ada isgaadhsiinta oo labadabada xukuumadu gacanta ku hayso. Khubarada arrimaha dhaqaalaha qiimaya ayaa saadalinaya inayna dawladu shirkadahan ka saari doonin gacanteeda.
Dawalada ayaa bilowaday ollole dib loogu soo jiidanayo maalgashiga iyo dalxiiska oo hoos u dhacay tan iyo intii rabshadaha xumi ka dhaceen Itoobiya.
Ururda u dooda xuquuqda aadanaha iyo mucaaradka dalka ayaa sheegay inay qulqulatooyinka ku naf-waayeen inta u dhaxeysa 500 – 800 oo qof.
F.G: Xuquuqda warka waxaa iska leh Somalistate.com oo isku soo dubariday